Iindiza ezisuka eSharm el-Sheikh ukuya kwisikhululo senqwelomoya saseMosodomedovo kwiAlMasria Universal Airlines ngoku
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » Iindiza ezisuka eSharm el-Sheikh ukuya kwisikhululo senqwelomoya saseMosodomedovo kwiAlMasria Universal Airlines ngoku
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zase-Egypt eziQhekezayo • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Iindaba zaseRashiya eziQhekezayo • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel
Ngexesha lenyanga yokuqala emva kokuqalisa kwakhona kweenqwelo-moya eziya kwiindawo ekuchithelwa kuzo iiholide zase-Egypt, eMoscow iDomodedovo kwisikhululo seenqwelomoya sabakhweli sidlule abantu abangama-20 amawaka.
Uhambo lokuqala lweAlMasria Universal Airlines lufika luvela eShum Sharm el-Sheikh ukuya kwisikhululo senqwelomoya saseMoscow iDomodedovo.
I-AlMasria Universal Airlines isebenza ngeenqwelomoya ezimbini ngeveki ukuya eHurghada naseSharm el-Sheikh ngolwesiThathu nangeeCawa, ngolwesiHlanu nangoMgqibelo ngokulandelelana.
Okwangoku, indawo ekuyiwa kuyo eJiphutha yenye yezona zidumileyo phakathi kwabahambi kwisikhululo senqwelomoya saseMoscow iDomodedovo.
Isikhululo senqwelomoya saseMoscow Domodedovo yamkelwe inqwelomoya yokuqala ye I-AlMasria Universal Airlines, ethe yavela kwelanga uSharm el-Sheikh.
UMphathi uqhuba iinqwelomoya ezimbini ngeveki ukuya eHurghada naseSharm el-Sheikh ngolwesiThathu nangeeCawa, ngolwesiHlanu nangoMgqibelo ngokulandelelana. Ukufika kwisikhululo seenqwelomoya iDomodedovo ngo-09: 20, ukuhamba ngo-10: 20.
Okwangoku, indawo ekuyiwa kuyo e-Egypt yenye yezona zidumileyo phakathi kwabahambi kwizibuko lomoya. Ngexesha lokuqala lenyanga emva kokuqalisa kwakhona kweenqwelomoya eziya kwiindawo ekuchithelwa kuzo iiholide zase-Egypt, abakhweli bezithuthi bangaphezulu kwama-20 amawaka abantu.
I-AlMasria Universal Airlines yinkampani yabucala yase-Egypt. Umntu ophetheyo usebenza ngenqwelomoya kunye nomnqatha wenqwelomoya ukuya kwiindawo ezili-14, uneminyaka eli-13 yamava kwicandelo lenkonzo yabakhweli.
KwiKomani, ngokusesikweni "iDomodedovo Mikhail Lomonosov International Airport" sisikhululo seenqwelomoya samazwe onke esiseDomodedovo, kwiPhondo laseMoscow, eRussia, iikhilomitha ezingama-42 kumazantsi mpuma ukusuka kumbindi weMoscow. Isikhululo senqwelomoya saseMoscow Domodedovo Mikhail Lomonosov sesinye sezona zixhobo zikhulu zomoya eRashiya. Ngo-2020, isikhululo seenqwelomoya sakhonza abakhweli abazizigidi ezili-16.4. Amalungu amanyano e-airline akhokelayo kwihlabathi kubandakanya i-Star Alliance kunye ne-oneworld bakhethile Isikhululo senqwelomoya saseMoscow Domodedovo ngenqwelomoya yabo eMoscow.
I-AlMasria Universal Airlines yinqwelomoya yabucala yase-Egypt ese-Egypt. I-airline isebenza ngeenkonzo ezicwangcisiweyo kunye nezitshatileyo ezivela eYiputa. 'AlMasria' ithathwe kwigama lesi-Arabhu elithetha 'umYiputa'.